Svondo, July 13, 2014 Mugovera, July 12, 2014 Douglas Karr
Kufunga kuti vana vangu vari kukura munguva iyo iyo Internet yaigara iri pano zvinoshamisa. Ichokwadi chekuti isu takatama kubva pakuita dial-up kusvika pakuva nemidziyo mizhinji mudzimba medu dzakabatana, kurekodha, uye kutibatsira kufamba mazuva ese kunoshamisa. Kufunga makore zana kubva zvino zviri-kupfuura zvandinoona. Nekuputika kwemafoni uye edu zvishandiso kuri kuwedzera kuwedzera simba, ndinogona kungofungidzira izvo zvinoratidzira
Mugovera, July 5, 2014 Douglas Karr
Iyi infographic inodhonza pamwe mimwe mibairo mikuru kubva kuAccenture's CMO Insights ya2014, asi ini ndinotya kuti inovhura nezita rinoshamisa iro rinomirirwa zvisirizvo. Inoti: 78% yeVapindura Vanobvumirana kuti kushambadzira kunotarisirwa kuti kuchinje zvakanyanya mumakore mashanu anotevera. Neruremekedzo, ini handibvumirani. Kushambadzira kuri kusimukira uye dijitari iri pamberi pemaitiro mazhinji. Mabhajeti ari kuchinja, magariro uye zvemukati marongero akawedzera, uye maturusi ari kuwana zvakawanda